Fadeexad Dul-hoganaysa Maayerka Berbera oo Kashifantay & Hanti Lunsiga uu Ku Kacay + Sawirro TC - somalilandlivemedia
11:39 3. July 2017
Maayerka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan (Cidin) muddadii uu xilka hayay magaalada Berbera waxa uu ka samaystay hanti badan taasi oo aad moodo in uu ka tabcaayo meherad uu leeyahay.
DHUL DAN-GUUD AH OO LAGU EEDEEYEY INUU IIBSADAY MAAYERKA BERBERA CABDISHAKUUR CIDIN 2017
Duqa Berbera Cabdishakuur Cidin, waxa uu ka dhistay guryo tiro badan magaalooyinka Hargeysa, Berbera waxa uu samaystay shirkado badan oo ka shaqeeya dalka waxa kale oo uu akoono ka samaystay Baananka ku yaala dalka isaga oo bil walba keena lacag tiro badan, lacagtaasi waxa uu ka keenaa marka uu soo iibiyo dhulkii dowliga iyo danta guud ee Magaalada Berbera.
DHULKA MAAYERKA BERBERA LA SHEEGAY INUU IIBSADAY OO SAWIRAN 2017
Dad kala duwan oo la socda arrimaha musuqa ee uu faraha kula jiro Cabdi-shakuur Cidin waxa ay sheegeen in uu haatan haysto lacag qiyaas ahaan gaadhaysa Toban Milyan oo Dollar taasi oo u taala akoonada uu ku leeyahay Baananka Somaliland.
Waxa uu dhulka ka iibiyay Shirkado gaar ah kuwaasi oo uu ka siiyay lacago badan, shirkadahaasi oo iyaga qudhooda aanu ku dabo jirno maadama ay qayb ka yihiin musuq maasuqa baahsan ee ka jira magaalada Bebrera.
Dadkii danyarta ahaa ee ku noolaa magaalada Berbera ee deganaa dhulkii danta guud ee dawlada ayuu Cabdi-shakuur Cidin ka baro kiciyay, ka dibna ka iibiyay ganacsato iyo qurba joog isagoo ka qaaday lacago badan oo dollar ah, lacagahaasi ma jirto waxa uu ugu qabtay magaalada Berbera.
DHULKA MAAYER CIDIN LAGU EEDEEEYEY INUU IIBIYEY EE BERBERA
Hase-yeeshee, wuxu dhigtay akoon gaar ah oo uu ku leeyahay mid ka mid ah baananka dalka. sharciga gacantiisa ayuu ku samaystaa dilaaliin farabadana wuu ku shaqaystaa si ay u fududeeyaana iibka dhulka danta guud.
Mudadii uu xilka hayay Maayarka Berbera waxa uu hantidii magaalada berbera xoolo uga sameeyay dad gaar ah oo ay is xiggaan kuwaasi oo uu ka dhigay ganacsato, waxanu u xidhay in wixii dawlada Hoose u baahato laga soo iibiyo.
Mana oggola Muwaaddin kale in wax laga soo iibiyo taasina waxay keentay in ay yaraadaan ganacsatadii ku daba noolayd Dawlada hoose ee Berbera waxa sidoo kale uu kiciyay meherado markii hore la lahaa xidhiidh dawlada Hoose kuwaasi oo uu lacagtii ay ku lahaayeen u diiday in uu bixiyo taasina waxay sababtay in ganacsato badani kacaan kana guuraan magaalada Berbera.
Wax yaabaha la yaabka leh waxa ka mid in Dawlada Hoose ee magaalada Berbera lagu leeyahay Dayn badan taasi oo lagu sheegay in ay tahay Dayn tii ugu badnayd ee lagu yeesho Dawladaha Hoose ee somaliland lamana garanaayo sababta keentay in daynta faraha badan lagu yeesho, tan iyo markii uu xukunka yimid ma jirto dayn uu bixiyay. hasa yeeshee wuxuu sii galay daymo badan.
Laaluushka iyo musuq maasuqa ayaa noqday wax iska caadiya Dawlada Hoose ee Berbera tan iyo markii uu xilka qabtay Cabdi-shakuur Cidin Abu Jahal waxana dhamaan laamaha iyo qaybaha kala duwan ee dawlada hoose noqdeen kuwo caadaystay qaadashada laaluushka, qofka aan bixin laaluush looma qabto shaqada taasina waxay keentay in shaqaalaha dhamaantood ku mamaan musuqa iyo maamul-xumada.
Maayarka magaalada Berbera mudadii uu xilka hayay waxa uu laaluush badan siiyay Xildhibaanada Golaha Deegaanka si aanay u dabo galin Musuq maasuqa iyo hanti lunsiga badan ee uu faraha kula jiro waxanu Xildhibaan kasta u iibiyay Guri iyo Gaadhi iyo lacag joogto ah. balse xildhibaanadu waxay moogayn yihiin waxa yar ee uu siiyay in ay ka badan tahay waxa uu lunsaday, xildhibaanada aadka u wax u fahansan ayaa lacagta badan qaata kuwaasi oo uu si gaar ah isaga ilaaliyo hasa yeeshee waxa jira xildhibaano kale oo aanay soo gaadhin wax buurani.
Xighayihii la doonayey inuu xakameeyo oo isu dheeli tiro awooda maayir ka ayaa isna noqday nin baahidu qaawisay oo ku qanacsan cadka yar ee loo tuuro. mana laha awood shakhsiyadeed iyo aqoon dowladeed ah midna.
Shacabka magaalada Berbera ayaa ku tilmaamay Maayarka magaalada BerberaAyax Ooman oo ku habsaday hantidii shacabka isla markaana hanti badan ka tabcaday, balse waxanay shacabku ka rajo dhigin in maalin uun la hor keeni doono maxkamada Cadaalada si loo marsiiyo Musuq maasuqii uu ka galay Magaalada Berbera lana marsiin doono ciqaab adag.
Muuqaalkan Hoose ka Daawo Cabashada Dad Shacab ah iyo Qaar Shaqaalaha Dawladda Hoose ka tirsanaa iyo Hanjabaadda iyo Awood-sheegashada Maayerka Berbera Cabdishakuur Cadin:-
Halka ka Akhriso Warbixino hore oo laxidhiidha Musuqa Maayirka Berbera
Dagaal ooge Muse Biixi oo ka hadlay guushiisa boobka uu ku Hantay jagada U saraysa Somaliland iyadoo Muwaadiniin U dhashay Gobolka Awdal Durba wadaan Qorshe lagu soo taagayo Maxakamada Aduunka
Halkan Ka Daawo Madaxweyne Biixi Oo Khudbad Carabi Iyo Soomaliya Iskugu Jirta Ka Jeediyey Dhagax-dhigii Jidka Berbera Corridor + War-qad Loo Soo Qorey Uu Ka Akhriyey
Gabiley:-Xukuumadda Oo Si Xoog Ah Kula Wareegtey Guri Uu Kiraystey Xisbiga WADDANI Iyo Masuuliyiinta WADDANI Oo Ka Haddley Falkaasi Video
Fadeexad Culus:-Wasiirkii Dhawaan Xilka Laga Qaadey Cali Xaamud Jibriil Oo Sheegay In Aanu Madaxweyne Siilaanyo Xilka Ka Qaadin Video
Faysal Cali Waraabe Oo Ka Haddley Xulashada Musharax Madaxweyne ku-xigeenkiisa Iyo Arrimo Kale Video
Newer PostXisbiga WADDANI oo Farta Ku Godey Heshiiskii ay Xukuumaddu La Soo Gashay Imaaraadka+Siyaasi Muniir oo Badka Soo Dhigay Mad-madowga Ku Jira Heshiiskaas
Older Post “Doqon Ka Hadli Iyadaa Is Sheegiye” – Fasiraadda Guddida Ka Garnaqa Dhulka Magaalooyinka